हेण्ड’सम पुरुष देखेपछी महिलाले सोच्छन यी कुरा ? – Ujyaalo Patrika
हेण्ड’सम पुरुष देखेपछी महिलाले सोच्छन यी कुरा ?
हेण्डसम / स्मार्ट पुरुषप्रति महिलाको सोच कस्तो हुन्छ त ?
विवाहित, प्रेमसम्बन्धमा बाँधिएका या अविवाहित हुन्, स्मार्ट पुरुष देखेपछि सबै महिलाको मनभित्र कुनै न कुनै इच्चा पैदा हुन्छ । तर आफ्नो इच्छालाई उनीहरुले लुकाउँछन् ।
जसरी महिलाको सुन्दरता देखेर पुरुष लोभिन्छन् त्यसरी नै हेण्डसम/स्मार्ट पुरुष देखेपछि महिलापनि हुरुक्क हुन्छन् ।
अविवाहित महिलाले यस्तो सोच्दछन् :
यदि महिला सिंगल वा अविवाहित भएमा स्मार्ट वा हेण्डसम पुरुष देख्ने वित्तिकै उक्त पुरुष मेरो ब्वाईफ्रेन्ड भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दछन् । हेण्डसम पुरुषले जहाँ काम गर्दछ, त्यही काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुले सोच्दछन् ।
यदि प्रेमसम्बन्धमा बाँधिएका भएमा आफ्नो प्रेमीपनि स्मार्ट वा हेण्डसम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दछन् ।
हेण्डसम पुरुष देख्नेवित्तिकै विवाहित महिलाको मनभित्र यौ*नसम्बन्धी भावना पैदा हुने गर्दछ । कैयौले मेरो विवाह नभएको भए स्मार्ट पुरुषलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउन सक्दथे भनेर सोच्दछन् । आफ्नो पतिपनि स्मार्ट र हेण्डसम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै विवाहित महिलालाई लाग्दछ ।
सम्बन्ध जतिसुकै लामो र राम्रो किन नहोस्, कुनै पनि विवाहित महिलाले हेण्डसम पुरुषलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरुको मनमा तरङ्ग पैदा हुन्छ । हेण्डसम पुरुषलाई साथी बनाउन वा उसँग घुमफिर गर्न के फरक पर्दछ र भनेर सोच्ने गर्दछन् ।
हेण्डसम पुरुषलाई देखेर किन पश्चाताप गर्दछन् महिला ?
यौ’न इच्छाका अलावा हेण्डसम पुरुषलाई देखेपछि वा भेटेपछि प्रायः महिलाले जारी सम्बन्धबारे पश्चाताप गर्दछन् । यसको कारण भनेको जारी सम्बन्धमा देखिने असन्तुष्टि, अभाव र खटपट नै हो । कतिले त हेण्डसम पुरुषलाई देख्ने वा भेट्नेवित्तिकै त्यो पुरुषसँग पहिला किन भेट नभएको होला भनेर पनि दुख मान्ने गर्दछन् । अनि यही पश्चाताप वा दुखका कारण वैवाहिक वा प्रेमसम्बन्धमा विवाद वा खटपट सुरु हुन्छ । यो कुरा पुरुषमा पनि लागू हुन्छ ।
Previous चुम्बनबारे १० रोचक जानकारी
Next खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट